Nkwekọrịta onye ọrụ - Ndị na -akwado E -mbupụ
Nkeji edemede 1. Ndị otu
Emechara nkwekọrịta Onye Ọrụ a (“Nkwekọrịta”) n'etiti Propars Teknoloji Anonim Şirketi (“Ụlọ ọrụ”) na onye debara aha dị ka onye ọrụ (“Onye ọrụ (ndị)”) na saịtị na www.propars.net (“Site”) . Nkwekọrịta ahụ ga -abanye n'ike mgbe onye ọrụ nabatara ya n'ụdị elektrọnik; Ọ ga -adịgide ma ọ bụrụ na ndị otu akwụsịghị ya dabere na usoro akọwapụtara na Nkwekọrịta ahụ.
Nkeji edemede 2. Isiokwu na akụkụ nke nkwekọrịta ahụ
Onye ọrụ mechiri nkwekọrịta a iji chọpụta usoro na ọnọdụ gbasara iji ego sitere na igwe ojii na ngwa njikwa azụmaahịa (“Ngwa”) na-enweta site na saịtị yana data (“Ọdịnaya”) nke Onye ọrụ buliri ya. Saịtị na ikike na ọrụ nke ndị ọzọ metụtara. Usoro ojiji, iwu na ọnọdụ ndị ụlọ ọrụ nyere ndị ọrụ gbasara ojiji saịtị na ngwa n'ime oke saịtị ahụ bụkwa mgbakwunye na akụkụ dị mkpa nke nkwekọrịta a wee bụrụ ikike na ọrụ niile nke ndị otu yana ikike na ọrụ dị n'ime ya.
Nkeji edemede 3. Ikike na ọrụ nke ndị otu
3.1 Onye ọrụ ahụ kwupụtara na ya/ya maara na ya ga-akwado nkwekọrịta a site na ịnye ozi nke ụlọ ọrụ ahụ rịọrọ n'ụzọ zuru oke, nke ziri ezi na nke kachasị ọhụrụ iji rite uru na Ngwa ahụ. Ọ bụrụ na enwere mgbanwe ọ bụla na ozi enyere n'oge ntọala ọnọdụ onye ọrụ, a ga -emelite ozi dị otu a ozugbo. Ụlọ ọrụ anaghị ahụ maka enweghị ike ịnweta ma rite uru na saịtị ma ọ bụ Ngwa n'ihi ozi ezughị ezu ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ ozi oge ochie.
3.2 Onye ọrụ na -ekwuputa na ya emechala afọ 18 ma nwee ikike iwu iji mechie nkwekọrịta a. Ọ bụrụ na onye ọrụ na -enweta saịtị ahụ n'aha azụmahịa, onye ọrụ nabatara wee kwupụta na ya nwere ikike dị mkpa iji mee ya. N'okwu a, ọkwa onye ọrụ, ikike na ọrụ ga -adị na azụmaahịa a na -ekwu maka ya.
3.3 Onye ọrụ nwere ikike iguzobe otu akaụntụ onye ọrụ, amachibidoro ịhazi akaụntụ nke abụọ site n'aka onye ọrụ na -eji otu ma ọ bụ ozi ndị ọzọ na -eso nkwụsị ma ọ bụ kwụsị akaụntụ onye ọrụ site na ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ nwere ikike ịjụ mmeghe nke akaụntụ onye ọrụ naanị n'echiche ya, na -enyeghị ihe kpatara ya.
3.4 Onye ọrụ ga-enweta saịtị ahụ site na iji adreesị ozi-e na paswọọdụ ya. Onye ọrụ ga -ahụ maka nchekwa nke nzuzo na nchekwa nke paswọọdụ a, yana ọrụ ọ bụla emere site na iji ozi ekwuru na saịtị a ga -ewere na onye ọrụ rụrụ ya, yana ọrụ iwu na mpụ ọ bụla na -ebilite. ọrụ ndị a ga -abụ nke onye ọrụ. Mgbe onye ọrụ matara maka iji paswọọdụ ya ma ọ bụ mmebi ọ bụla ọzọ na -enweghị ikike, ọ ga -agwa ụlọ ọrụ ahụ ozugbo.
3.5 Onye ọrụ ahụ na -anabata ma na -ekwenye na ọ ga -eji Ngwa ahụ maka ọrụ iwu kwadoro ya, yana na ọ ga -eme ihe kwekọrọ na nkwekọrịta a, mgbakwunye ya, iwu dị adị yana usoro na ọnọdụ ndị ọzọ akọwapụtara na saịtị gbasara ngwa ahụ. Onye ọrụ ga -enwe ike iji Ngwa na saịtị ahụ n'aha ndị ọzọ ma ọ bụrụhaala na enyere ya ikike ịnye ndị ọzọ ọrụ. N'ọnọdụ a, onye ọrụ ga -ahụ na ndị kwuru ga -eme ihe kwekọrọ na nkwekọrịta a yana ndokwa ndị ọzọ metụtara ya.
3.6 Onye ọrụ nwere ike nye ndị ọzọ ikike (“Onye ọrụ enyere ikike”) ka ha jiri Ngwa site n'oge ruo n'oge. Onye ọrụ ga -abụ ọkwa onye ọrụ ga -ekpebi ọkwa ikike n'ime ngwa ahụ. Onye ọrụ bụ ọrụ maka ojiji nke ndị ọrụ nyere ikike nke ngwa ahụ, ọ ga na -ejikwa ohere ndị ọrụ nyere ikike na ngwa ahụ wee nwee ike gbanwee ọkwa nnweta nke onye ọrụ nyere ikike na ngwa n'oge ọ bụla na enweghị ihe kpatara ya, ma ọ bụ kagbuo ohere ha. Ọ bụrụ na arụmụka bilitere n'etiti onye ọrụ na onye ọrụ nyere ikike gbasara ịnweta ngwa ahụ, onye ọrụ ga -ekpebi ohere onye ọrụ nyere ikike nweta ngwa ma ọ bụ ọdịnaya yana ọkwa nnweta.
3.7 Ọdịnaya nke Onye ọrụ kesara bụ ihe onye ọrụ na ibu ọrụ niile maka ọdịnaya bụ nke onye ọrụ. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike iji ọdịnaya n'okpuru ikike onye ọrụ nyere ya n'okpuru nkwekọrịta a. Enweghị ike ijide ụlọ ọrụ ahụ maka ọdịnaya ma ọ bụ mfu ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke ọdịnaya nwere ike bute, na ụlọ ọrụ enweghị ọrụ maka, mana ọnweghị oke, ịgbaso iwu, izi ezi nke ọdịnaya, ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ọnụahịa, nchịkọta. , azụmahịa ego na mkpesa ụtụ isi. Ọ bụ naanị ọrụ onye ọrụ ịhụ na nrube isi n'iwu dị mkpa maka azụmahịa ego, ụtụ isi na okwu ndị ọzọ. Onye ọrụ ahụ kwenyere na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ihichapụ ọdịnaya site na Ngwa yana sistemụ ya dabere na ihe ndị na -esite n'iwu dị ugbu a, ọkachasị ụkpụrụ ego, yana ụlọ ọrụ anaghị ahụ maka mmebi ọ bụla nwere ike ime na ọnọdụ a, gụnyere data furu efu. .
3.8 Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwa ahụ bụ nke ndị ọzọ kwadoro, Onye ọrụ agaghị etinye aka na mmemme ga -etinye nchekwa na ntụkwasị obi nke kọmpụta na sistemụ netwọkụ nke ndị ọzọ a, ngwa, arụmọrụ nke ngwa ahụ, saịtị ma ọ bụ ndị ọzọ. sistemụ nke enyere ọrụ, ma ọ bụ Ngwa yana ịghara iji saịtị ahụ n'ụzọ na -egbochi ma ọ bụ na -emerụ ndị ọrụ ndị ọzọ uru site na ha ma ọ bụ na -eji ha eme ihe n'ụzọ na -adịghị mma, ọ bụghị iji nye ohere ịnweta sistemụ kọmputa ebe a na -akwado ngwa ahụ, ma ọ bụ na sistemụ kọmpụta nke ụlọ ọrụ na ndị ọzọ, na -abụghị oke ohere enyere na ngwa ahụ, ọ gaghị ebufe ma ọ bụ bulite faịlụ ma ọ bụ ọdịnaya na -ezighi ezi nke ga -emebi ngwaọrụ na ngwanrọ ha (gụnyere nwebiisinka ma ọ bụ azụmaahịa ọdịnaya na ihe ndị ọzọ. Onye ọrụ enweghị ikike iji), na ịnye ọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ saịtị ahụ. Ọ na -anabata ma na -agba mbọ na ọ gaghị agbanwe, detuo, megharia, mepụtaghachi, mepụta koodu isi ma ọ bụ tụgharịa injinịa mmemme kọmputa ejiri na ụlọ ọrụ belụsọ ma ọ dị ezigbo mkpa maka ojiji nkịtị.
3.9 Onye ọrụ nabatara na ojiji Ngwa a nwere ike ịdabere na mmachi, gụnyere azụmahịa kwa ọnwa na oke nchekwa. A ga -ekwupụta ụdị mmachi a n'ime Ngwa.
3.10 Onye ọrụ ga -edobe nnomi nke ọdịnaya etinyere na ngwa ahụ. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na -agbaso iwu na usoro dị mkpa iji gbochie mfu data, ọ naghị ekwe nkwa na ọdịnaya agaghị efu. Companylọ ọrụ ahụ abụghị maka mfu nke ọdịnaya, n'agbanyeghị etu o siri dị.
3.11 Companylọ ọrụ ahụ ga -echekwa ma jiri ozi na data Onye ọrụ kesara n'etiti oke "amụma nzuzo", nke bụ na mgbakwunye na nkwekọrịta a. Onye ọrụ kwenyere na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịkekọrịta ozi onye ọrụ na ndị ọchịchị dị mkpa mgbe ndị isi ruru eru dabere na iwu dị ugbu a. Ewezuga nke a, enwere ike iji ozi gbasara onye ọrụ yana azụmahịa nke onye ọrụ na saịtị na -arụ maka nchekwa nke onye ọrụ, mmezu nke ọrụ ụlọ ọrụ yana maka ụfọdụ nyocha mgbakọ na mwepụ. Ụlọ ọrụ ahụ nwekwara ikike ịkekọrịta Ọdịnaya ahụ n'etiti ndị ọrụ ndị ọzọ iji nye ọrụ ndị achọrọ dị ka iziga akwụkwọ ọnụahịa, ịkekọrịta ozi ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ iji ọdịnaya nke ndị ọrụ ndị ọzọ, ọ ga -enweta nkwenye nke ndị ọrụ dị mkpa wee jiri ọdịnaya dị n'ime oke nkwado nke onye ọrụ nke ọzọ nyere. Enwere ike ikewapụta ma chekwaa ozi a na nchekwa data, ụlọ ọrụ ahụ ga -ejikwa ojiji na ozi azụmahịa nke onye ọrụ na -enweghị aha maka oge dị mkpa maka nyocha arụmọrụ, mkpọsa ahịa nke ụlọ ọrụ na ndị mmekọ azụmahịa ya, akụkọ kwa afọ yana azụmahịa yiri ya. eji mgbe emechara ya. Onye ọrụ na -anabata na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike ịchekwa ọdịnaya na ozi ndị ọzọ na ebe data dị na Turkey ma ọ bụ ná mba ọzọ.
3.12 N'ọnọdụ nsogbu ọrụaka na Ngwa ahụ, onye ọrụ ga -eme ezi mbọ iji chọpụta ma chọpụta nsogbu ahụ tupu ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na mkpa nkwado teknụzụ onye ọrụ ahụ ga -aga n'ihu, a ga -enye nkwado dị mkpa site na saịtị, ngwa ma ọ bụ ọwa ndị ọzọ dabara adaba.
3.13 Ọ bụrụ na enyere Onye ọrụ ahụ ngwaọrụ nkwukọrịta (dị ka ọgbakọ, ngwaọrụ nkata ma ọ bụ ebe ozi) site na saịtị, onye ọrụ na -ekwupụta ma na -ebido iji ngwa nkwukọrịta ndị a naanị n'ime ebumnuche ebumnuche. Onye ọrụ ahụ nwere ike iji ngwa nkwukọrịta ndị a maka ire ngwaahịa na ọrụ, ozi ịntanetị zitere na-enweghị nkwenye ndị ọzọ, faịlụ nwere ike imerụ ngwanrọ na sistemụ kọmputa nke ndị ọzọ, ọdịnaya nke na-akparị ndị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọdịnaya iwu akwadoghị, gụnyere ihe ndị ọzọ na -abụghị ebumnuche nke Ngwa ahụ. Onye ọrụ ahụ na -agba mbọ na ya/ya nwere ikike ime nke a na usoro nkwukọrịta ọ bụla ọ na -eme site na saịtị. Ụlọ ọrụ ahụ enweghị ọrụ ịlele ịdị mma nke nkwukọrịta emere site na saịtị ma ọ bụ ma ọ bụ maka ebumnuche nke iji Ngwa ahụ. N'ihe gbasara ngwaọrụ nkwukọrịta dabere na weebụ ndị ọzọ na-enweta site na Ngwa ahụ ma ọ bụ jiri ya na ngwa ahụ, onye ọrụ ga-egosi nlekọta o kwesịrị igosi mgbe ọ na-eji ngwaọrụ nkwukọrịta sitere na saịtị ahụ. Companylọ ọrụ ahụ nwere ikike iwepu ngwaọrụ nkwukọrịta nke enyere site na saịtị n'oge ọ bụla n'ikike ya.
3.14 Companylọ ọrụ ahụ nwere ikike ịtụgharị nkwekọrịta a na mgbakwunye ya na -enweghị ọkwa ọ bụla, ma ọ bụrụ na ejiri ikike a mee ihe, mgbanwe dị mkpa ga -amalite n'iji ojiji nke saịtị a mee ihe ọzọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ anabataghị mgbanwe ndị a, echekwabara ikike ịkwụsị nkwekọrịta a dịka ekwuru n'okpuru.
3.15 Onye ọrụ ahụ enweghị ike ịnyefe ma ọ bụ kenye akaụntụ onye ọrụ yana ikike na ọrụ na -esite n'iji saịtị a na nkwekọrịta a nye ndị ọzọ n'ụzọ ọ bụla.
3.16 Ọ bụrụ na Onye ọrụ ahụ mebie usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta a yana usoro na ọnọdụ ndị ọzọ n'ime oke nkwekọrịta a yana nkwupụta na nkwa na ọnọdụ a, ụlọ ọrụ ahụ ga -enwe ikike ịkwụsị otu onye ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ. ọnọdụ onye ọrụ site na ịkwụsị Nkwekọrịta dị ka ekwuru n'okpuru. N'ọnọdụ dị otú a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ikwu ebubo mmebi sitere na mmebi dị otú ahụ n'aka onye ọrụ.
Nkeji edemede 4. Ọnọdụ ịkwụ ụgwọ
4.1 Onye ọrụ ga -enwe ike irite uru na Ngwa naanị na nkwụghachi maka ịkwụ ụgwọ ekwuputara na saịtị ahụ n'ụzọ zuru oke yana n'ụzọ ịkwụ ụgwọ ekwuputara na saịtị ahụ.
4.2 Onye ọrụ ga -enwe ike iji Ngwa n'efu maka oge akọwapụtara na saịtị. Na ngwụcha oge nnwale ahụ ekwuru, ndị otu onye ọrụ ga -abụ ndị otu akwụ ụgwọ ka ekpebie dabere n'ụdị ọkwa ọrụ, arụmọrụ, mkpọsa ma ọ bụ oge nkwekọrịta. Ụgwọ maka Ngwa, usoro ịkwụ ụgwọ, ụbọchị ịkwụ ụgwọ dị irè ka a ga -ama ọkwa na ngalaba dị mkpa nke saịtị ahụ. Onye ọrụ ahụ ga -enwe ike ịkwalite ma ọ bụ wedata ngwungwu ndị otu dị na aka ya. A ga -arịọ arịrịọ maka nke a na njedebe nke oge ndị otu dị mkpa, belụsọ na ụlọ ọrụ kwupụtara. Mgbanwe ndị a ga -eme na ụgwọ na ọnọdụ ịkwụ ụgwọ nke ngwungwu ndị otu n'oge onye ọrụ agaghị etinye n'ọrụ ruo na njedebe nke oge onye otu onye ọrụ, na ụgwọ ọhụrụ na ọnọdụ ịkwụ ụgwọ ga -adị ire na mbido oge ndị otu ọhụrụ. . Agaghị akwụghachi ma ọ bụrụ na akwụsịla ndị otu maka ihe ọ bụla, gụnyere nkwụsị nke Nkwekọrịta, n'oge oge ndị otu.
4.3 Ọ gwụla ma onye ọrụ rịọrọ ya n'ụzọ ọzọ (ụbọchị iri na anọ) tupu ngwụcha oge a, a ga -eme ka ndị otu onye ọrụ ọhụrụ dị ọhụrụ na njedebe oge ọ bụla.
4.4 Companylọ ọrụ ahụ ga -eziga akwụkwọ ọnụahịa gbasara ụgwọ ojiji na mmalite nke oge onye otu na adreesị kọntaktị nke onye ọrụ nyere. Akwụkwọ ọnụahịa niile ga -agụnye ụgwọ maka oge ndị otu gara aga ma ọ bụrụ na ị bụrụ onye akwụghachi ụgwọ ụgwọ, yana ụgwọ maka ndị otu sochirinụ ma ọ bụrụ na ndị otu akwụgoro ụgwọ. Onye ọrụ ga -akwụ ụgwọ dị mkpa n'ime akwụkwọ ọnụahịa n'ime ụbọchị iri na anọ (iri na anọ) na -esote ụbọchị akwụkwọ ọnụahịa. Onye ọrụ bụ ọrụ maka ịkwụ ụtụ isi na ọrụ metụtara ụgwọ ndị dị mkpa.
4.5 Onye ọrụ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ kwadoro nwere ike chekwaa kaadị kredit nke onye ọrụ yana ozi ịkwụ ụgwọ ka ha wee nwee ike rụọ otu na ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ mwekota akụ na mmelite metụtara ya.
Nkeji edemede 5. Ikike ikike ọgụgụ isi
5.1 Ikike niile, nwe na mmasị na saịtị na ngwa dịịrị ụlọ ọrụ ahụ. N'ime oke nkwekọrịta a, a na-enye onye ọrụ ikike nkeonwe, nke zuru ụwa ọnụ, nke nweere onwe ya, enweghị ike nyefee ya na enweghị ikike iji saịtị na ngwa. Enweghị ihe ọ bụla dị na Nkwekọrịta ahụ na usoro ndị ọzọ nke saịtị ahụ ka ị na -ebufe ikike na uru saịtị na ngwa ahụ n'aka onye ọrụ. N'ime oke nkwekọrịta a, onye ọrụ nyere ụlọ ọrụ ahụ ikike iji, detuo, nyefee, chekwaa ma chekwaa ozi na ọdịnaya maka ịnweta onye ọrụ na ngwa ahụ, iji ngwa yana ebumnuche ndị ọzọ maka ịnye ọrụ. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike iwepụta ọdịnaya ndị nrụpụta ndị ọzọ maka ebumnuche ịnye ọrụ.
5.2 Onye ọrụ ahụ enweghị ikike idetuo, gbanwee, mepụtaghachi, tụgharịa injinịa, gbakọta ma ọ bụ nweta koodu isi ngwanrọ ọzọ na saịtị, ma ọ bụ mepụta ọrụ site na saịtị, n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla. Amachibidoro kpamkpam ịgbanwe ihe nchọgharị na ọdịnaya nke saịtị n'ụzọ ọ bụla, ijikọ na ma ọ bụ site na saịtị na -enweghị ikike ụlọ ọrụ.
5.3 Onye ọrụ nwere ike idobe aha azụmaahịa nke ụlọ ọrụ (ma ọ bụ ndị enyemaka ya), akara, akara ọrụ, akara, aha ngalaba, wdg. agaghị eji.
Nkeji edemede 6. Oke nke ibu
6.1 A na -enye ngwa, ngwanrọ na ọdịnaya ndị ọzọ n'ime oke saịtị a "AS IS" na n'ime oke a, ụlọ ọrụ enweghị ọrụ ma ọ bụ nkwa gbasara izi ezi, izu oke na ntụkwasị obi nke ngwa, ngwanrọ na ọdịnaya. Onye ọrụ ahụ ghọtara ma nabata na ụlọ ọrụ ahụ anaghịkwa ekwe nkwa ọ bụla gbasara mmekọrịta dị n'etiti Ọdịnaya na data Onye ọrụ ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ anaghị eburu n'uche na ojiji nke ngwa ahụ anaghị akwụsị akwụsị yana enweghị njehie. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na -achọ ime ka ngwa ahụ bụrụ nke nwere ike ịnweta na 7/24, ọ naghị ekwe nkwa arụmọrụ yana nnweta nke sistemụ na -enye ohere ịnweta ngwa ahụ. Onye ọrụ ahụ kwenyere na enwere ike igbochi ma ọ bụ kwụsịtụ ịnweta ngwa ahụ site n'oge ruo n'oge. Companylọ ọrụ ahụ enweghị ọrụ maka igbochi ma ọ bụ nkwụsị dị otú a.
6.2 Onye ọrụ ahụ na -ekwu na enwere ike ịnwe njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ na/ma ọ bụ ọnụ ụzọ mbata, faịlụ ma ọ bụ ọdịnaya nke na -anọghị n'okpuru ụlọ ọrụ ahụ, yana ụdị njikọ ahụ abụghị nkwupụta ma ọ bụ nkwa nke ụdị ọ bụla iji kwado weebụsaịtị. onye ọrụ ya ma ọ bụ maka webụsaịtị ma ọ bụ ozi o nwere., nabata ma kwupụta na ụlọ ọrụ enweghị ọrụ maka ọnụ ụzọ, webụsaịtị, faịlụ na ọdịnaya, ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa enwetara site na njikọ dị otú ahụ ma ọ bụ ọdịnaya ha.
6.3 Onye ọrụ na -anabata na ịnweta na ịdị mma nke Ngwa na Ngwa enyere na saịtị ahụ dabere na ogo ọrụ nke Onye na -ahụ maka ịntanetị nyere, yana ụlọ ọrụ ahụ enweghị ọrụ maka nsogbu na -esite n'ịdị mma ọrụ ahụ. .
6.4 Onye ọrụ bụ naanị maka ọdịnaya ọ na -ebugo na ojiji saịtị na ngwa. Onye ọrụ ahụ kwenyere na ọ na -akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ahụ site na nkwupụta na arịrịọ ọ bụla (gụnyere ụgwọ ịgba akwụkwọ na ụgwọ onye ọka iwu) nke ndị ọzọ nwere ike ime gbasara imebi ihe ọgụgụ isi, ọdịnaya, Ngwa na ojiji nke saịtị ahụ.
6.5 Ruo oke iwu iwu kwadoro, ụlọ ọrụ ahụ agaghị enwe ike ịdaba maka mmebi ọ bụla ozugbo, na -apụtachaghị ìhè, pụrụ iche, ihe mberede ma ọ bụ ntaramahụhụ sitere na iji saịtị ahụ, gụnyere mana ejedebeghị na ihe ndị dị ka mfu uru, mfu nke ihe ọma na aha, yana mmefu maka ịnye ngwaahịa na ọrụ nnọchi anya agaghị abụ ihe kpatara ya. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ na -ewepụkwa ikike ọ bụla nke ụdị ọ bụla, kwupụta ma ọ bụ gosipụta, gụnyere mana ejedebeghị na akwụkwọ ikike nke ire ahịa, ịdị mma maka otu ebumnuche. Ibu ọrụ nke ụlọ ọrụ n'okpuru Nkwekọrịta a, n'ọnọdụ ọ bụla ga -ejedebe na ego onye ọrụ kwụrụ n'ime oke ọrụ dị n'okpuru nkwekọrịta a ruo ụbọchị mmebi nke metụtara ya.
Nkeji edemede 7. Ịrụ ọrụ na ịkwụsị nkwekọrịta a
7.1 Nkwekọrịta a ga -abanye n'ike mgbe onye ọrụ nabatara ya n'ụdị elektrọnik, ọ ga -adịgidekwa ọ gwụla ma onye otu ọ bụla kwụsịrị ya dị ka ekwuru n'okpuru.
7.2 Ndị otu ọ bụla nwere ike kwụsị nkwekọrịta a n'oge ọ bụla na-enyeghị ihe kpatara ya na akwụghị ụgwọ ọ bụla, na-eji ọkwa edere na adreesị ozi-e nke ndị ọzọ kwupụtara, 1 (otu) izu tupu oge eruo.
7.3 N'ọnọdụ na otu n'ime ndị otu ahụ emezughị ọrụ ya nke ọma site na nkwekọrịta a n'ụzọ zuru oke na nke ọma na edozighị esemokwu a n'ime oge enyere n'agbanyeghị agbanyeghị ọkwa edere nke onye nke ọzọ ga -eme, nkwekọrịta a nwere ike kwụsịchaa ya. otu na -eme ọkwa. Ọ bụrụ na onye ọrụ mere mmebi ahụ kwuru, ụlọ ọrụ ahụ ga -enwe ikike ịkwụsị ọnọdụ onye ọrụ ruo mgbe edozi mmebi ahụ. Ọ bụrụ na Onye ọrụ mebie iwu dị adị, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike mebie Nkwekọrịta ahụ na ezigbo ihe kpatara ya ozugbo.
7.4 Nkwụsị nke nkwekọrịta ahụ agaghị ewepụ ikike na ọrụ nke ndị otu bilitere ruo ụbọchị nkwụsị. Site na nkwụsị nke Nkwekọrịta ahụ, onye ọrụ ga -ahụ maka ụgwọ na mmefu niile ruru ụbọchị ahụ ma ọ gaghị enwe ike iji saịtị na ngwa dị ka ụbọchị nkwụsị. N'ọnọdụ nkwụsị nke ndị otu akwụgoro ụgwọ, a gaghị akwụghachi onye ọrụ ụgwọ.
7.5 Ọ bụrụ na akaụntụ onye ọrụ adịghị arụ ọrụ ọnwa atọ (atọ), ụlọ ọrụ ahụ nwere ike kwụsị nkwekọrịta a.
7.6 N'ọnọdụ ebe anaghị egbochi akaụntụ onye ọrụ maka ebumnuche iwu wee kwụsị Nkwekọrịta ahụ, Companylọ ọrụ ahụ ga-enye naanị ohere ịnweta ọdịnaya maka ọnwa 6 (isii).
7.7 Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ịchekwa ọdịnaya n'ime ọdụ data ya ma ọ bụrụhaala na Nkwekọrịta a na -arụ ọrụ. N'ime ọnwa isii (isii) na -esochi njedebe onye otu onye ọrụ ma ọ bụ nkwekọrịta a, onye ọrụ ga -enwe ike ịnweta Ọdịnaya n'efu. Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka arịrịọ ndị dị otú ahụ etinyere mgbe oge a gachara. A ga -akọwapụta ụgwọ ndị dị mkpa n'ime oke nke ngwa ahụ.
Nkeji edemede 8. Nhazi dị iche iche
8.1 Enweghi ike, iwu na -ezighi ezi na enweghị ike ime ihe ọ bụla nke nkwekọrịta a ma ọ bụ nkwupụta ọ bụla dị n'ime ya agaghị emetụta ịdị irè na ntinye nke ihe ndị ọzọ fọdụrụ na nkwekọrịta.
8.2 Nkwekọrịta a zuru oke yana mgbakwunye ya. Ọ bụrụ na esemokwu ọ bụla dị n'etiti nkwekọrịta na mgbakwunye ya, ihe ndị dị na mgbakwunye dị mkpa ga -adị.
8.3 A ga-akpọtụrụ onye ọrụ ahụ site na ozi-e ha kọrọ mgbe ha na-edebanye aha ma ọ bụ site na ozi izugbe na saịtị. Nkwurịta okwu site na e-mail na-ewere ọnọdụ nkwurịta okwu ederede. Ọ bụ ọrụ onye ọrụ idobe adreesị ozi-e ya ọfụma yana inyocha saịtị mgbe niile maka ozi.
8.4 Istanbul Central (Çağlayan) Ụlọ ikpe na ụlọ ọrụ mmanye ga -enwe esemokwu na -esite na nkwekọrịta a yana mgbakwunye ya.